घर किन्दै हुनुहुन्छ ? एकपटक सोच्नु होला-NepalKanoon.com
घर किन्दै हुनुहुन्छ ? एकपटक सोच्नु होला
असार २१, काठमाण्डौ । घर किन्दै हुनुहुन्छ ? सपना साकार पार्नुअघि धेरैपटक सोच्नुहुन्छ होला । अर्काले बनाएको घर कत्तिको बलियो छ भनेर छरछिमेक वा चिनेजानेकालाई सोध्नु हुँदो हो ।
ती शुभेच्छुकहरुले आफूले देखेजानेको त बताइदेलान् तर उनीहरुको भनाइ विश्वसनीय हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी त पक्कै हुँदैन । तपाईंले चाहेको जस्तो ग्यारेन्टी गर्ने प्रविधि भने छ । विकसित मुलुकका इन्जिनियरहरुले प्रयोगमा ल्याइरहेको त्यस्तो प्रविधि नेपालमा सजिलै पाइन्छ ।
इन्जिनियरिङ भाषामा ‘नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्ट’ भनिने त्यस्तो प्रविधिले घरको ‘एक्सरे’ गरेर रिपोर्ट दिन्छ । कुनै पनि घर वा भवन कत्तिको बलियो छ र अझै कति वर्ष टिक्छ भन्ने त्यो प्रविधिबाट जाँचेर थाहा पाउन सकिन्छ ।
वैंकटेस इन्जिनियरिङ एसोसिएट्सले अहिले पोखरामा घरहरुको नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्ट गरिरहेको छ । सिभील इन्जिनियर नवराज त्रिपाठीसहितको टोलीले केही व्यक्तिका घर र निजी विद्यालयका भवनहरुको जाँच गरिसकेको छ । नागरिक दैनिक